I-China Ukusetshenziswa Kwokwakhiwa Kwensimbi Engagqwali kanye Nefektri | UDaren
Ukusetshenziswa Kokubhinca Kwensimbi Engagqwali
Inezinhlobonhlobo zezicelo zamandla kagesi nezinhlelo zokuphakelwa kwamandla. Izinzuzo zayo ziboniswa ku:
1. Imikhiqizo yensimbi engagqwali yethayi ayinqunyelwe ukwakheka nosayizi wento okufanele iboshwe;
2. Isakhiwo sebhakede esilula senza kube lula ukuxakaniseka kwendilinga yendabuko;
3. Ukusebenza kahle kokuqina kuqinisekisa ukuphepha kwezinto eziboshiwe;
4. Insimbi engagqwali ikhebula izibopho ziyizinto ezilwa nokubola kanye nezinga lokushisa eliphezulu ukumelana nezinto ukuqinisekisa imvelo enhle nezidingo zokuvikela umlilo;
Ukusetshenziswa kwezintambo zensimbi engagqwali embonini yezimoto:
1. Izinto zokuvala umoya zamapayipi wokukhipha imoto. Ukusetshenziswa kwezintambo zekhebula esikhundleni sendlela yokushisela yendabuko kugwema isimo sokucindezeleka ukwephula iphuzu lokushisela ngenxa yokwanda okushisayo. Khulisa impilo yebhodi lokufaka ukushisa futhi uthuthukise ukuthembeka. Indlela elula yokufaka inciphisa izindleko zepayipi lokukhipha.
2. Ikhava lothuli lwe-shaft yemoto shaft. Imikhiqizo yensimbi engenantambo yensimbi inenzuzo yokungalinganiselwa ngosayizi, okunciphisa ukufakwa kwempahla okwakhiwe ngenxa yobukhulu obuhlukile bemboni ekhiqiza imiphini yokushayela. Isakhiwo esilula namandla aphakeme athembekile ahlinzeka ngokusebenza okuhle kukhava lothuli lwe-shaft drive.
3. Ibhasi lamabhuleki. Imikhiqizo yensimbi engagqwali ethayi iqinisekisa ukuthembeka kwebhasi lamabhuleki ezimoto ngothayi wekhebula lwensimbi engagqwali. Ngasikhathi sinye, indawo engaphezulu yebhasi ivikelwe ekulimaleni.
4. i-airbag. Ekulungisweni kwama-airbags ezimoto, ukusebenza okuthembekile kwama-airbags kuqinisekisiwe.
5. Isetshenziswa emapayipini okufaka amanzi ezimotweni nasemapayipini okuphuma kanye namapayipi omoya, uthayi wekhebula lensimbi engagqwali uqinisekisa ukubekwa uphawu, ukuphepha nokuthembeka kwepayipi ngokuqina kwayo okuhle.
Ukuphakama kwemikhiqizo yekhebula lensimbi engagqwali kwizimpawu zikamasipala nezimpawu:
1. Akukhawulelwanga ukwakheka kobuso nosayizi wento okufanele iboshwe;
2. Ukusebenza kahle kokuqina kuqinisekisa ukuzinza nokuphepha kophawu;
3. Isakhiwo esilula nokubopha amandla amakhulu kunciphisa izindleko zokuphatha kukamasipala;
4. Ukukhethwa kwensimbi engagqwali kuhlobisa imvelo nokuphathwa kukamasipala;
Izibopho zekhebula lensimbi engenasici zisetshenziswa kakhulu emikhakheni ehlukahlukene yomkhakha. Izintambo zezimboni, amapayipi ezimboni, izimpawu zezimboni, imibhoshongo yamanzi yezimboni nezinye izinto eziningi zisebenza kahle.
1. Imikhiqizo yensimbi engenantambo engenantambo inikezela ngemikhiqizo engu-304SS, 201SS, 316SS, 317L, iMonel nezinye izinto ukuqinisekisa izidingo ezikhethekile zemboni yokulwa nokugqwala nokuvikelwa komlilo;
2. Ukuqina kokuqina kokuqina kuqinisekisa ukuphepha kokukhiqizwa kwezimboni;
3. Indlela elula yokufaka ihlinzeka lula ukufakwa kwezimboni, ithuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi, futhi inikeze Ukuvikelwa kokuphathwa okuphuthumayo.
4. Ithayi lekhebula lensimbi engagqwali elinobufakazi bomlilo nokulwa nokugqwala kuqinisekisa ukuphepha kwezintambo zezimboni. Kufakwe ku
Ukugqugquzela ukukhiqizwa okuphephile nokuvikela imvelo
Imikhiqizo yensimbi engenantambo engagqwali ikhombisa inzuzo enamandla embonini yamapayipi.
1. Ingakwazi ukugoqa amapayipi wanoma yibuphi ububanzi;
2. Umklamo oyingqayizivele wamabhakede unophawu oluhle ekubambeni ibhande, kuqinisekisa ukulingana kwengcindezi kulo lonke uzibopho wethayi;
3. Ubungako besikhwama samapayipi esivele senziwa ngcono kuthuthukisa ukusebenza kahle kokufakwa kwepayipi;
4. Nciphisa ukubalwa kwezingqinamba zamapayipi, izibopho zamapayipi ezenziwe ngaphambilini zingahlanganisa noma iyiphi ipayipi elincane kunobukhulu bayo;
5. Amathuluzi kagesi asebenza kahle kakhulu namathuluzi womoya, kanye nedizayini yokuguquguquka eguquguqukayo iqinisekisa ukuqina nokuqina kokufakwa.
Isetshenziswa kabanzi ekuqiniseni izintambo zokuxhumana zasendlini nezintambo zokuxhumana zangaphandle.
1. Intambo yekhebula lensimbi engagqwali iqinisekisa ukuphepha kwentambo yokuxhumana ngokuqina kwayo okuhle;
2. Ithayi eliyingqayizivele lekhebula lensimbi engagqwali ligcina isikhala sokunwetshwa okushisayo kwekhebula, eliqinisekisa ukuqina okuthembekile futhi ngasikhathi sinye kuqinisekisa ukuthi indawo ayiklwebheki;
3. Umklamo oyingqayizivele futhi onelungelo lobunikazi lokuvikela ukucisha umlilo uqinisekisa ukusebenza kwekhebula elingenamlilo nokuphepha.
Ngezidingo ezikhethekile emkhakheni wezindiza, izibopho zekhebula lensimbi engagqwali zinokusebenza okuvelele.
1. Izibopho zentambo zensimbi engagqwali ezinokwethenjelwa ziqinisekisa ukuphepha kwezintambo zezindiza ezindaweni ezinzima;
2. Ukukhethwa kwezinto ezingashi umlilo kuhlangabezana nezidingo zomkhakha wezindiza;
3. Idizayini ekhethekile yokuvikelwa kwentambo iqinisekisa indawo yekhebula ngenkathi iqinisekisa ukuthi ikhebula liboshiwe;
4. Insimbi engagqwali ikhebula izibopho zidlala inzuzo enhle emapayipini kawoyela endiza kanye namapayipi omoya.